Uyifumana njani iNgingqi yoMgaqo weTrapezoid
Ngomgaqo we-trapezoid, endaweni yommandla osebenzisa ii-rectangles (njengoko usenza ngasekhohlo, ekunene, kunye neendlela zangaphakathi zoxande), uqikelela indawo nge-unokuthelekelela? - trapezoids.
Ngenxa yendlela i-trapezoids eyanga ngayo ijika, ikunika indawo ebhetele kakhulu yokuqikelela kunamaxande asekhohlo okanye asekunene. Kuyavela ukuba ulinganiso lwe-trapezoid ngumndilili woxande osekhohlo kunye noqikelelo lwexande lasekunene. Ngaba uyasibona isizathu? (Icebo: Indawo yetrapezoid nganye yi-avareji yemimandla yoxande abahambelanayo kwiingqekembe zasekhohlo nasekunene.)
Inani elingezantsi libonisa ii-trapezoids ezintathu ezitsaliwe phantsi komsebenzi x Mbini+1.
Ukusuka kwinkangeleko yeli nani, unokulindela ukuba uqikelelo lwe-trapezoid lubengcono kunokuqikelelwa koxande oluphakathi, kodwa enyanisweni, njengomgaqo jikelele, izibalo eziphakathi ziphakathi kokuphindwe kabini kulunga kuqikelelo lwetrapezoid.
Ukuba sele ulwenzile ulungelelwaniso loxande olwesobunxele kunye nolwasekunene lomsebenzi othile kunye nenani elithile loxande, ungabateketisa nje ukuba bafumane ingqikelelo yetrapezoid ehambelana nayo (kule ngxaki, uyazi impendulo oza kuyifumana ngu (8 + 17) / 2 = 12.5). Ukuba akunjalo, nantsi ifomula:
Umsebenzi okweli nani lingentla une-trapezoids ezintathu, nazi izibalo:
xanax, yenzelwe ntoni?
Nangona inkcazo esesikweni yento eqinisekileyo yokusekwa isekwe kwinani elingenasiphelo lamaxande, unokufuna ukucinga ngokudityaniswa njengomda womgaqo we-trapezoid kumda ongapheliyo. Okukhona usondeza kwigophe, ngokuthe ngqo iya kufumana. Xa usebenzisa inani elikhulu kwaye likhulu le-trapezoids kwaye usondeza apho i-trapezoids ichukumisa khona ijika, iintloko ze-trapezoids ziya zisondela kufutshane nejika. Ukuba usondeza ngokungapheliyo, iincopho zezininzi ze-trapezoids ziba yigophe kwaye, ngenxa yoko, isixa seendawo zabo sikunika eyona ndawo iphantsi kwegophe. Le yindlela elungileyo yokucinga ukuba kutheni indibaniselwano ivelisa eyona ndawo-kwaye iyavakala ngokomqondo- kodwa ayenziwa njalo ngale ndlela.
Uyivavanya njani imakrofoni yam
i-otc yokukhanya okushushu
igama lophawu lwe-polyethylene glycol
apho ukumamela khona iipodcast
Ungalitshintsha njani ixesha kwi-Android
yintoni i-fluoxetine 40 mg esetyenzisiweyo
ngaphezulu kwekhawuntala ye-benzos